स्थानीय उत्पादन केन्द्रीत पाँचौ महोत्सव | Trishuli Khabar - Trishuli News Network
अन्तर्वार्ता१५ फाल्गुन २०७४, मंगलवार
महासचिव, नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघ
पाँचौ नुवाकोट महोत्सवको मुख्य उद्देश्य के हो ?
नुवाकोट जिल्लाको समग्र विकासका सम्भावनाहरुलाई उजागर गर्दै परम्परागत कला र संस्कृतिको जगर्नेना, व्यवसायिक कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, उद्योग, हस्तकला एवं व्यापार व्यवसायलाई प्रवर्धन गरी जिल्लामा आर्थिक तथा लगानी मैत्री वातावरणको सिर्जना तथा बाह्य लगानीलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले ३ नं. प्रदेशस्तरीय पाँचौ नुवाकोट महोत्सव गर्न लागिएको हो ।
पाँचौ महोत्सवको मुख्य आकर्षण के हो ?
पाँचौ नुवाकोट महोत्सवको तयारी करिव करिव सकिएको छ । केही बाँकी रहेका कामहरु पूरा गर्न हामी रातदिन खटिइरहेका छौँ । अघिल्ला महोत्सवहरुको तुलनामा यो महोत्सवलाई मौलिक परम्परा झल्कने खालको, स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको र स्थानीय संस्कृतिलाई माया गर्ने खालको विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीवीच सल्लाह भइरहेको छ । हामीले सोही अनुसारको तयारी पनि गरिरहेका छौँ । माटोको भाँडा बनाउने र ढिकीजाँतो महोत्सव स्थलमै राख्न लागेका छौँ । यो पनि हाम्रो परम्परासँग गाँसिएको कुरा हो । नुवाकोटमा उत्पादन हुने कृषि उपजसहित अन्य उत्पादनहरुको बजारीकरणको लागि पाँचौ महोत्सव सफल हुनेछ र नुवाकोटमा औद्योगिक विकासको राम्रो सम्भावना रहेछ भनेर प्रमाणित हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु । यो महोत्सवले नुवाकोटमा रहेका परम्परा र संस्कृतिलाई माथि लेराउने छ, साथै आर्थिक विकास र नुवाकोटका विकासका सम्भावनाहरुलाई पनि उजागर गर्नेछ ।
महोत्सवले नुवाकोटको आर्थिक विकास र व्यवसायिक रुपमा कस्तो फाइदा हुन्छ ?
महोत्सवमा आर्थिक क्रियाकलाप नै केन्द्रीत हुन्छ । यसले सदरमुकाम विदुर लगायत नुवाकोट जिल्लाको चहलपहल बढ्छ । यसबाट यहाँका व्यापारीहरुलाई फाइदा हुन्छ । महोत्सवमा घुम्न आउने व्यवसायीहरुले नुवाकोटमा सञ्चालन गर्न सकिने उद्योगहरुको बारेमा अध्ययन गर्नुहुनेछ, यसबाट पनि उद्योग स्थापनामा सहयोग पुग्नेछ । नुवाकोटमा भएका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको प्रचारप्रसार हुन्छ । यसबाट पनि पर्यटन प्रर्वधनमा सहयोग पुग्छ । जलविद्युतको सम्भावना यस जिल्लामा रहेको छ । यी सम्भावनाहरुलाई पनि हामीले उजागर गर्न सक्नुपर्छ । कृषिमा आधुनिकीरण गर्न सकिएमा नुवाकोटले आर्थिक विकासको ठूलो फड्को मार्न सक्छ । अहिले थानसिंदेखि काठमाडौंको टोखासम्म सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने चर्चा रहेको छ । यसलाई सार्थक बनाउन पनि यो महोत्सवले भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ । चीन र भारत जोड्ने त्रिदेशीय मार्ग गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुवेशी सडकले ठोरी नाकालाई अझ नजिक बनाएको छ । अहिले रेलमार्गको कुरा अघि बढेको छ । रेलमार्ग अघि बढेमा नुवाकोट आर्थिक विकास र समृद्धिको अभियानमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । स्थानीय उत्पादनलाई हामीले प्रोत्साहन गरेका छौँ । स्थानीय व्यावसयीहरुलाई छुट दिएका छौँ । यसले गर्दा पनि यो महोत्सवले व्यवसायिक रुपमा पनि महत्व राखेका छ ।
महोत्सव मनोरञ्जन केन्द्रीत भयो भन्ने आरोप पनि छ नी ?
महोत्सवमा मनोरञ्जनका साथै स्थानीय उत्पादनका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सामानहरुको खरिद विक्री गर्ने थलो हो । हामीले यस पटक नेपाल बाख्रा पालक महासंघसँग समन्वय गरेर महोत्सव स्थलमै बाख्रा महोत्सव नै गर्दैछाँै । १२ वटा बाख्रा सम्वन्धी स्टल रहने छ । यहाँबाट बाख्रापालन गर्न चाहने किसानलाई फाइदा पुग्ने छ । बाख्राजन्य उत्पादनबाट बनेका परिकारहरु उपलब्ध गराइने छ । बाख्रा पालन गर्न चाहने किसानलाई आवश्यक परामर्श पनि दिइने छ । जिल्लामा उत्पादित कृषि उपजहरु प्रदर्शनी गरी उत्कृष्ठ किसानलाई पुरस्कृत गर्नको लागि कृषि विकास कार्यालय मार्फत समन्वय भइसकेको छ । घरेलु उत्पादनलाई हामीले प्राथमिकता दिनेका छौँ । लघु उद्यमीहरुसँग समन्वय गरी लघु उद्यमीले उत्पादन गरेका लघु, घरेलु, हस्तकलाका सामान प्रदर्शनी तथा विक्री वितरण हुनेछ । नुवाकोट जिल्ला पछिल्लो समय ट्राउट हाइवेको जिल्लाको रुपमा विकास भइसकेको छ । ट्राउट माछाका परिकारहरु पनि महोत्सवमा उपलब्ध हुनेछ । साथै स्थानीय प्रतिभाहरुको खोजी र उनीहरुको प्रतिभाको सम्मान गर्नको लागि जिल्लास्तरीय माविस्तरीय लोकनृत्य प्रतियोगिता गरेर पुरस्कृत गर्न लागेका छौँ । त्यसैले महोत्सवलाई मनोरञ्जनसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ ।
महोत्सवमा हुने खर्च पारदर्शी छैन भन्ने आरोप छ नी ?
अहिलेसम्म चार वटा नुवाकोट महोत्सव सम्पन्न भइसकेको छ । चौथो नुवाकोट महोत्सवमा भएको खर्च हामीले लेखापरीक्षषण गरी साधारणसभाबाट स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । यसलाई पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । अघिल्लो महोत्सवमा भएको नाफाबाट विदुर नगरपालिका क्षेत्रमा सिसिटीभी राख्ने काम भएको छ । जिल्लामा हुने विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता, सामाजिक संघसंस्थाले गर्ने रचनात्मक काममा सहयोग गर्ने, गोरु जुधाईसहित अन्य विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने, भुकम्पपीडित, बाढीपीडितलाई पनि सहयोग गर्ने काम भइरहेको छ । महोत्सवमा धेरै आर्थिक विषय जोडिन्छ, त्यसकारण पनि यस्ता विषयहरु आइरहन्छ । साधारणसभाबाट स्वीकृत भइसकेको विषय कसरी पारदर्शीता छैन भन्न मिल्छ ?
TAGS: दिपक कायस्थनुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघमहोत्सव
“नुवाकोटको ऐतिहासिक महत्वलाई जोगाइ राखौँ”:…
एमसीसी सम्झौताः भ्रम र यथार्थ
नुवाकोट महोत्सव सम्पन्न, ५ करोडको कारोबार
“छैठौँ महोत्सवले नुवाकोट औद्योगिकीकरणमा जान सहयोग पुग्छ”: ताराबहादुर कार्की
स्थानीय सरकार: जनताको बन्न योजना कार्यान्वयनमा सुशासन
अस्वभाविक रुपमा बढेको भारतिय गतिविधि: राजु तिवारी
घरमै पुगेर जेष्ठ नागरिक भत्ता